Barkimooyinka balastarrada: fikradaha carruurta, Christmas-ka, qolalka looxa, guryaha...
barkimooyin balastar ah
Haddii aad rabto qurxinta shakhsi ahaaneed ee gurigaaga, ma jiraan wax la mid ah barkimada qoqobo. Sababtoo ah waxaad ku dhejin kartaa labadaba kuraasta iyo kursiga weyn, adigoon iloobin sariirta. Inta aan ka fekereyno meesha aan ku dhejineyno, aan aragno sida ay u fududahay in la sameeyo.
Sida loo sameeyo barkinta Patchwork talaabo talaabo
Marka hore, waa inaad raadisaa kuwaas dharka in aad rabto in aad ka faa'iidaysato. Waad dooran kartaa isku dar maro midab leh oo siman ama leh qaabab kala duwan. Talaabadani had iyo jeer waa mid aad jeceshahay!
Markaad haysato dharka, dad badan ayaa doorta inay dhaqdaan. Sidan oo kale haddii ay tahay inay yareeyaan, way fiican tahay in la sameeyo hadda ee maaha marka aan barkintayada diyaarsaneyno. Ka dib markaad dhaqdo, u ogolow inay si buuxda u engegaan oo ku bireeyaan.
Hadda waxaad u baahan tahay googooy marada labajibbaaran, kaa caawinta gooyo dhar gaar ah iyo taliye. Cabbiraadaha sidoo kale way kala duwanaan karaan, iyadoo ku xiran hadba inta aad rabto naqshadeyntaada. Laakiin haa, wax kasta oo aad doorato, xasuusnoow in aad had iyo jeer ka tagto hal gabal oo kale oo ku hadhi doona margin marka aad tolidayso.
Markaan dhammaan googooyno, waxaan ku habeyneynaa miiska dushiisa. Sidan, waxaan ku caawin doonaa nafteena si aan u aragno sida naqshaduhu u ekaan lahaa.
Kadibna waxaanu soo qaadnaa laba qaybood oo u dhignaa dhinaca midigta oo ku biir mashiinka tolida. Waxaan samayn doonaa xariijimo maro ah. Ma noqon doonaan kuwo aad u weyn, sababtoo ah si loo sameeyo barkimooyinka Patchwork, waxaan u baahan doonaa saddex ama afar xabbo oo kasta.
Markaan xariijimaha isku haysano, waxaan ku celineynaa miiska. Xarigga sare waanu ka biraynaa gudaha iyo tolayga. Xarigga dhexe ee gudaha iyo kan hoose ayaa sidoo kale dibadda laga biili doonaa. Marka si fiican loo kariyo, waxaan ku soo laabaneynaa mashiinka si aan ugu biirno xargaha dharka. Waxaan horay u haysanay, tallaabadan, qaybta hore ee barkinta ayaa diyaar ah.
Dhabarka waxaan u baahanahay dhar midab leh, oo la doorbidayo siman. Waxaynu u kala qaadaynaa laba qaybood. Waxaan ku biiri doonaa, inta u dhaxaysa hal iyo qayb kale, siibadaha.
Kadibna, waa in aan ku biirnaa qaybtan dambe ee qaybta hore, iyada oo ka tagaysa siibadaha oo furan. Sababtoo ah marka barkinta la tolo, waanu rogi doonaa waana taas. Hadda waxa kaliya ee hadhay waa inaad meel dhigto buuxintaada!
Haddii aad wax shaki ah ka qabtid, waxaanu ku dhaafnay casharo kale oo fiidiyoow ah si aad tallaabo tallaabo u aragto si faahfaahsan:
Gallery of barkinta Patchwork oo leh qaabab
Shaki la'aan, Ubaxyadu waxay ku habboon yihiin inay daboolaan barkimooyinka Patchwork. Qaab aan waligiis ka bixin qaabka oo si fiican isugu dari doona qolalka fadhiga iyo qolalka kaleba. Intaa waxaa dheer, waxaad had iyo jeer ku dari kartaa qaar ka mid ah faahfaahinta qurxinta sida sequins ama wax kasta oo kale oo maskaxda ku haya si aad u dhamaystirto abuuristaada.
Haddii aad rabto in aad isku daydo samaynta barkintaada balastar ee ubaxa, halkan waxaa ah labo ka mid ah qaababka taas ayaa ku caawin doonta. Kaliya waa inaad gujisaa sawirada si aad u weyneyso:
Wixii ah qolalka carruurta, Barkinta balastarku sidoo kale waa qumman yihiin. Dabcan, waa inaan la qabsanaa naqshadaha. Sidaa darteed, waxaan arki doonaa sida sawirada tareenada, guryaha ama caruusadaha iyo magacyadu u soo galaan mashaariicdayada.
Si aad u tababarto, halkan waxaa ah ururinta nashqadaha leh ujeeddooyinka carruurta oo aad ku isticmaali karto barkinta:
Guryuhu sidoo kale waa qayb ka mid ah haraadiga, iyagana, waxaan samayn doonaa barkimo cusub oo Patchwork ah. qaab leh burush classic iyo rustic aan waligood ka baxayn qaabka.
Haddii aad raadineyso fikrado aad ku sameysan karto barkin guri, halkan waxaa ah qaabab kugu dhiirigelinaya:
Wakhtiga jacaylka halka ay jiraan. Marka kirismasku yimaado waxaan inta badan guriga ku qurxinnaa dhammaan noocyada tafaasiisha oo naga buuxinaysa sixir. Haddaba maxaa diidaya barkimada kirismaska anaga samaysanay?
Ma ka heshay iyaga? Haddii aad rabto in aad samaysato barkin kirismas oo kuu gaar ah, halkan waxaa ah afar qaab oo aad ku bilaabayso. Guji mid ka mid ah sawirada soo socda si aad u weynayso:
Qaab dhismeed ina xusuusinaya qaab dhismeedka qolalka. Taasi waa meesha ay magaceedu ka yimid oo waa farsamo fudud, kaas oo raacaya qaabab taxane ah, waxaad isku dhejin doontaa maro iyo natiijadu waa mid cajiib ah.
Haddii aad jeceshahay iyaga, halkan waxaa ah ururin ballaaran oo qaabaysan oo loogu talagalay barkinta qolalka looxa. Guji sawirada si aad u weyneyso:
Mashiinka dharka » barkimooyin balastar ah